Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Uzbekistan na -agbasa » Uzbekistan ga-anabata ọgbakọ UNWTO nke iri abụọ na ise
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • ndị mmadụ • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ Uzbekistan na -agbasa
Ụbọchị nke atọ nke 24th nnọkọ nke UNWTO Mgbakọ izugbe hụrụ ka ndị otu na-ezukọ iji kparịta ma kwado mmemme nke ọrụ maka afọ abụọ na-abịa. N'okwu a bụ mkpebi siri ike nke ndị isi UNWTO ịkwaga Secretariat nso na mba ndị otu, dị ka ihe atụ nke ụlọ ọrụ mpaghara mbụ maka Middle East, meghere na June nke afọ a ma kwadoro ya site n'aka ndị otu mba na General Assembly. Ọtụtụ ndị otu kwupụtara ọchịchọ ịnabata ụlọ ọrụ mpaghara n'ọdịnihu wee bụrụ ebe nchekwa maka ọrụ UNWTO na mpaghara ha.
Ndị otu mere ntuli aka maka Uzbekistan ịnabata nke iri abụọ na ise UNWTO Mgbakọ izugbe, nke akwadoro ka eme na 2023 wee kwenye inyocha atụmatụ imepụta ndị ọrụ ọhụrụ na 'Redesign Tourism for the Future'. Na mgbakwunye, ekwenyela na Bali dị na Indonesia dị ka onye ọbịa maka ụbọchị njem nlegharị anya ụwa nke 2022, nke a ga-eme n'oge isiokwu 'Ichegharị njem nlegharị anya', ebe akwadoro alaeze Saudi Arabia n'otu aka ahụ dị ka obodo ọbịa maka ụbọchị njem nlegharị anya ụwa 2023, nke a ga-eme. gburugburu afọ nke 'Tourism for Green Investments'.
Oge ọzọ nke UNWTO'S General Assembly ga-enwe na Uzbekistan obodo nke Samarkand.
N'ịkele ndị nnọchi anya maka votu ha, Minista njem nlegharị anya nke mba ahụ na onye osote onye isi ala Aziz Abdukhakimov kwuru na ọ na-atụ anya ịnabata ha niile na obodo akụkọ ihe mere eme, na-eme ka o doo anya na akụrụngwa adịlarị maka nzukọ na-aga nke ọma.